Horudhac: Arsenal vs Manchester City… (Wax ka ogow rikoorrada u gaarka ah kulankan caawa ka dhacaya garoonka Emirates) – Gool FM
(London) 21 Feb 2021. Manchester City ayaa isha ku heysa inay sii waddo socodkeeda ku aaddan dib u hanashada horyaalka Premier League marka ay garoonka Emirates ku wajahayaan Arsenal fiidnimada caawa oo Axad ah.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Pep Guardiola ayaa guuleysatay 17-keedii kulan ee ugu dambeeyey ee ay ciyaartay tartammada oo dhan, waxaana ku jira 12 kulan oo horyaalka ah, iyadoo 10-dhibcood oo saafi ah ku haysata hoggaanka horyaalka.
Man City ayaa haatan 22-dhibcood ka sarreysa kooxda ay booqanayso ee Arsenal oo ku jirta kaalinta 10-aad.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 7:30 Fiidnimo xilliga geeska Afrika.
Arsenal ayaa wax dhibaato dhaawacyo cusub ah qabin, inkastoo ay barbaro la soo galeen naadiga Benfica Khamiistii ciyaar qeyb ka ahayd tartanka Europa League.
Kieran Tierney ayaa ku soo bilaaban kara safka hore kaddib markii uu ka soo laabtay dhaawac muddo uu la maqnaa, waxaana uu bedel ku soo galay kulankaas, laakiin Thomas Partey ayaa shaki laga gelinayaa kulankan.
Gooldhaliyaha ugu sarreeya horyaalka Premier League Kooxda Manchester City ee Ilkay Gundogan ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kaddib markii uu seegay guushii ay ka gaareen Everton sababo la xiriir dhaawac gumaarka ah.
Nathan Ake waa ciyaaryahanka kaliya ee ka maqan Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Pep Guardiola.
>- Manchester City ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League la ciyaartay Gunners, iyadoo dhalinaysay ugu yaraan labo gool sagaal ka mid ah kulammadaas.
>- Arsenal ayaa guuldarro la kulantay todobo kulan todobo kulan oo xiriir ah horyaalka oo ay wajaheen Man City, iyagoo ku guuldarreystay inay gool dhaliyaan saddexdoodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkooda ku soo dhoweeyeen City.
>- The Gunners ayaa ku guuldarreysan karta inay gool dhaliso afar kulan oo xiriir ah oo ay horyaalka ku soo dhoweysay garoonkeeda hal koox markeedii ugu horreysay taariikhdeeda.
>- Guushii ay Arsenal ka gaartay Leeds kulankii ugu dambeeyey ayaa ahayd guushii ugu horreeyey oo ay gaarto afar kulan oo horyaalka Premier League ah.
>- The Gunners ayaa guuldarro la’aan ah haatan lix kulan oo horyaalka ay ku ciyaartay garoonkeeda, waxaana ay haysataa saddex guul iyo saddex barbaro.
>- Afarta guuldarro ee Arsenal garoonkeeda ku soo gaartay xilli ciyaareedkan 2020-21 waxay la mid tahay khasaarihii ugu badnaa ee ku soo gaaray garoonka Emirates hal xilli ciyaareed gudihiis.
>- Gunners waxay kaliya oo ay guuleysteen saddex ka mid ah 18-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ka horyimaadeen hoggaamiyaasha horyaalka, waxayna kala kulmeen 4 barbaro iyo 11 guuldarro.
>- Si kastaba ha noqotee, guushii ay Arsenal ka gaartay Liverpool bishii July ayaa la micno ah inay guuleysan karaan kulan oo xiriir ah oo ay la ciyaarayaan kooxda ugu sarreysa horyaalka markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2007, markaasoo kulanka labaad ay sidoo kale ka hor yimaadeen Manchester City.
>- Saddexleydii uu Leeds ka dhaliyay Pierre Emerick-Aubameyang ayaa la micno ah inuu dhaliyay 201 gool 369 kulan oo uu saftay ciyaaraha horyaalka heerka koowaad.
>- Manchester City waa kooxdii ugu horreysay ee guuleysata 10-ka kulan ee ugu horreeya sanadka.
>- Guushii ay ka gaareen Everton ayaa sii dheereysay rikoorkooda guulaha 17-ka kulan tartammada oo dhan, 12 ka mid ahna waa horyaalka.
>- Man City lagama badinin 24 kulan oo tartan rasmi ah tan iyo guuldarradii 2-0 ee ka soo gaartay Tottenham bishii November.
>- Man City ayaa barbareyn karta rikoorkeeda kooxda ee ah inay 11 kulan oo xiriir ah bannaanka ku soo adkaadaan tartammada oo dhan, rikaarkaasoo ay hore u sameeyeen laga soo bilaabo bishii May ilaa November ee sanadkii 2017-kii.
>- Waxa ay shabaqooda gool ka ilaashadeen 22 kulan, waana in ka badan kooxaha kale ee ka ciyaara shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub ama afarta horyaal ee ugu sarreysa England.
>- Ilkay Gundogan ayaa hoggaaminaya gooldhalinta Manchester City ee Premier League, isagoo u dhaliyey 11 gool 12-kiisii kulan ee ugu dambeeyay oo uu u saftay.
Everton oo saddexda dhibcood kaga soo qaadatay Liverpool garoonkeeda Anfield… +SAWIRRO